Dayuuradda Dhexdeeda Ayaa Lagu Siiyay Abaal Marin - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA Dayuuradda Dhexdeeda Ayaa Lagu Siiyay Abaal Marin
Dayuuradda Dhexdeeda Ayaa Lagu Siiyay Abaal Marin
Waxay ka mid ahayd rakaabkaa Shirkadda Dayuurada Cebu Pacific Air taasi oo ka duushay Dubia kuna socotay Philipin maalintii Isniintii. Markii ay dayuuraddu hawada ku jirtay 5 saacadood ayay hooyo ka mid ah rakaabka fooli qabatay, waxaana usoo gurmaday laba hablood oo caafimaadka ka mid ah oo rakaabka ah.
Sida uu daabacay Wargeyska Daily Mail hooyadan ayaa umushay ilme yar iyadoo wakhitgeeda caadiga ah ay ka dhiman tahay 2 bilood (7 bilood keliya ku dhashay). Amandal oo ka mid ahayd rakaabka ayaa wargeyska u sheegtay inay kuwada baraarugeen hooyada xanuunka adkaysan weyday, wax yar ka dibna umushay. Dadkii rakaabka ayaa marayo iska ururiyay si ilmaha yar loogu qabto, waxayna ugu maydheen biyihiii ay rakaabku haysteen.
Dayuuradda ayaa intaasi ka dib ku degtay Hindiya si loo badbaadiyo gabadha yar ee ku dhalatay 7 bilood caafimaadkeeda Gargaar caafimaad ka dib dhakhaatiirta aya sheegay inay duuli karan hooyada iyo ilmaheeduna ay caafimaad qabaan, laakiin dawladda Hinidya ayaa ilmahaasi yar markiiba siisay dhalshada dalkooda iyo weliba Passaport degdeg ah madaama ay safar ku jiraan kaasi oo ilmaha yar dayuuradda lagu saaray, madaama uu Hindiya tahay dalka ugu horeeyay ee ilmahan yar arko. Waxa kale oo iyan yaab noqotay in shirkadda dayuuradaha Cebu Pacific Air”، ee gabadha yari ku dhex dhalaty ay cadaysay in safar kasta oo gabadha yari raacdo shirkadan uu yahay bilaash kan ugu horeeya uu yahay kan wakhtigan ay ku gaadhasyo dalkeeda Philipin.
Previous articleQiso : Ninkan Waxba Ma Xadin!
Next article12 Qodob Oo Aad Ku Dhisi Karto Tarbiyada Caruurtaada